थप ५० लाख कोरोनाविरुद्धको खोप किनिँदै, निजी क्षेत्रलाई यस्ता छन तीन सर्त « Postpati – News For All
फागुन १७, काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको कोभिसिल्ड खोप थप ५० लाख डोज (मात्रा) खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए। त्यसपछि कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत प्राप्त हुने खोप उपलब्ध गराइनेछ। त्यसले २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने जनाइएको छ।
सामान्य प्रयासले खोप आएको होइन : हृदयेश त्रिपाठी
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अहिले कमर्सियल कोमोडिटीभन्दा पनि पोलिटिकल कोमोडिटी भएको छ। सामान्य प्रयासले नेपालमा खोप आएको होइन। खोप उत्पादक मुलुक, संस्था एवं निकायले सहयोग नगर्ने हो भने प्राप्त गर्न कठिन छ।
भारतबाट प्रति डोज चार डलरमा २० लाख डोज खरिद गरिएको छ। यो सहुलियत दरमा ल्याइएको हो। केही सर्त हुन्छन्। ती सर्त पूरा नगर्ने हो भने खोप पाउन सक्ने अवस्था छैन। खरिदका लागि वार्ता चलिरहेको छ। पारदर्शिताको विकल्प छैन। श्वेतपत्र जारी गर्ने पक्षमा छु म। खरिद कति कति भयो ? अनुदान कहाँबाट कति कति पाइयो ? उपहारमा कति प्राप्त भयो ? खर्च कति भयो भनेर श्वेतपत्र जारी गर्ने पक्षमा छु। सम्भवतः आउँदो संसद् अधिवेशनमा एउटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य पनि सार्वजनिक गर्दै छु।
खोप खरिद गर्न ४८ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जति रकम अनुमान गरिएको छ, त्यो खर्च हुँदैन। खर्च (विकास खर्चजस्तो) नगर्दा कारबाही त हुँदैन होला नि ! खोप लगाउन २३ गतेदेखि योग्य हुन्छु। मन्त्रीजी र सांसदजीहरूले पनि यसपटक खोप लगाउने कार्यक्रम छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।